Guusha Super Cup waxay Liverpool siisaa fikrad ku aaddan dhibaatada qorrax madoobaadka xilli ciyaareedkii hore - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS Guusha Super Cup waxay Liverpool siisaa fikrad ku aaddan dhibaatada qorrax madoobaadka xilli ciyaareedkii hore
Guusha Super Cup waxay Liverpool siisaa fikrad ku aaddan dhibaatada qorrax madoobaadka xilli ciyaareedkii hore
ISTANBUL - Wuxuu ahaa 17 h 00 markii goolhayaha Adrian wuxuu badbaadiyay rigooradii Tammy Abraham oo ku guuleysatay UEFA Super Cup ee Liverpool. Jordan Henderson asxaabti ay isku kooxda ahaayeen ayaa soo xaadirtay koobkii labaad ee yurub muddo seddex bilood ah garoonka dhexdiisa, nus saac ka dib .
"Habeenki" Liverpool iyo Chelsea, finalka.
Ku guuleysiga ayaa ah mid dareen murugo leh ku leh tartamayaasha, iyo aragtida tababarahiisa Jurgen Klopp iyo ciyaartoydiisa oo ku ordaya garoonka Vodafone Park ka dib markii taakulo Adrian ay muujiyeen sida ay guushu u tahay guuleysiga. Liverpool. Waxay ugu soo muuqdeen iyagoo xamaasad ka ah Istanbul sida Madrid ka dib markii ay ka qaadeen Tottenham oo ku guuleysatay Champions League bishii June
. Labo daqiiqo iyo barbaro ka dib daqiiqadihii 90 iyo waqti dheeri ah oo aan kala fogeyn labada tartan ee Ingriiska, Liverpool ayaa ogaan doonta qiimaha dhabta ah ee guushaan.
- Qiimeynta Chelsea: Kante wuxuu ku guuleystay 8 / 10, Pulisic 7 / 10 guuldaradii koobkii
- Xusuus-qorka Liverpool: Qaylada ayaa ah mid muhiim ah halka Reds ay kor u qaado Super Cup
Si kastaba ha noqotee, xilli ciyaareedkoodu wuxuu u muuqdaa furitaanka markan ay bilaabeen arbacadii oo ay soo gabagabeeyaan Khamiista, waxaa laga yaabaa inay sidoo kale cadeyn karto xilli ciyaareedkooda microcosm. Waxay noqon doontaa shaqo dheer oo adag ilaa safka dhammeeya. Haddii Liverpool ay rabto inay ka faa ideysato guushii ay ka gaartay Champions League iyo inay soo afjarto sanadihii 30 ee sugitaanka horyaalka Ingriiska ee May, waxay wajihi doontaa tijaabo xitaa marka loo eego go'aaminta iyo taam ahaanshaha marka loo barbar dhigo xilli Markii ugu dambeysay, sidaa darteed waxay aad ugu dhowaatay la dagaallanka hanashada Premier League ee faraha Manchester City.
Bilowga, waa inay dib u helaan jirkooda iyo maskaxdooda waqtiga loogu talagalay Sabtida, saacadaha 15. Safarka maxalliga ah ee Southampton ka dib safar afar saacadood oo wareeg ah oo uu galabta galab ku tagayo England. Chelsea, oo soo celisay sharaftoodii isla markaana muujisay balanqaad ka dib guuldaradii Axadii 4-0 ee Manchester United, ma ciyaari doono ilaa iyo axada, waxayna leedahay faa iidada ay ku sii joogaan garoonkooda kulankii Leicester halkii ay mar kale u safri lahaayeen. sida ay Liverpool tahay.
U-qalmitaanka ku ciyaarista Super Cup-ka badhtamihii Agoosto, maalmo uun ka dib bilowgii xilli ciyaareedkii Premier League, ka dibna ku qasbay labada kooxoodba inay taageeraan 30 daqiiqado dheeri ah ka hor inta aan rigoorayaashu noqon dood Maalin kale, marka xigmadda, ama haddii kale, oo ciyaar laba saacadood ah si habboon loo baaro. Klopp runti wuu ka yaabay go’aanka ah inuu ciyaaro waqti dheeri ah halkii uu toos toos ugu ciqaabi lahaa ciqaabta 90 daqiiqadood ka dib.
"Uma maleynayo in qof garoonka jooga uu doonayo inuu arko labo jeer 15 daqiiqo," ayuu yiri Klopp. . Runtii waxay ahayd dil, laakiin waa sidaas oo kale. Qofna ma dooneynin kordhin.
Liverpool ayaa ku guuleysatay UEFA Super Cup ka dib markii 120 uu daqiiqado ka dib rigooreyaal ka qaatay Chelsea. Michael Regan / Getty Images
Waxaan ciyaareynaa Sabtida waana inaan helnaa wado aan isku diyaarino. Xilliyada 90, [Tababaraha Chelsea] Frank Lampard wuxuu weydiiyay meesha iyo goorta aan ciyaarno ciyaarta xigta. Sabtidii waxaan u sheegay Southampton, wuuna qoslay oo yidhi, "Hambalyo." "
Si kastaba ha noqotee, ka dib markii ay ku guuleysteen Champions League, waxay dhadhamisay waxa ay Liverpool u baahan tahay inay bartaan.
Way sameeyeen. Xilli ciyaareedkii hore ma aheyn wax sahlan, laakiin Liverpool kaliya waxay ciyaartay 52 tartamada oo dhan, waxaa laga reebay Carabao Cup ka dib hal kulan, waxaana guuldarro ka soo gaartay Chelsea wareega seddaxaad, halka Wolves ay ka ciribtrtay kulankaan. . FA Cup wareega saddexaad ee Janaayo.
Horaantii xilli ciyaareedkan, Liverpool waxa ay ciyaareysay oo ay guuldarro ka soo gaartay Community Shield kulankii ay la ciyaareen City, iyadoo kulankaan ay la ciyaareen Chelsea, kulan kale oo uusan aheyn inuu wajaho xilli ciyaareedkii hore. Waxay hubineysaa in Liverpool ay ka qeybgasho Koobka Adduunka ee FIFA Club World Cup ee bisha Diseembar, kaasoo lagu soo dari doono labo kulan, oo aan lagu xusin duullimaadka sideed saacadood u aado Qatar (Safarka wareega).
Magaalada ayaa ciyaaray 61 ciyaarood ka hor inta aysan ku guuleysan seddex seddexleey qaran xilli ciyaareedkii hore, Liverpool waa inay markale ku celcelisaa inay ciyaarto ugu yaraan ciyaartooyda 60 xilli ciyaareedkaan, inayna ku dhicin isla marka ay barbaro la mid ah isla galaan wareega. diiwaangelinta tartamada koobka qaran ee la qabtay sanadkii hore. Way adag tahay in la qiyaaso in City ay siiso wax dhiirrigelin ah iyaga oo u fududeeya wax Liverpool xilli ciyaareedkan. Klopp iyo ciyaartoydiisa ayaa lagayaabaa inay bartaan sidii tamartooda loo tijaabin lahaa inta ay joogaan Istanbul, halka Fabinho et Joe Gomez ciyaarta ayaa ku soo gabagabowday daaweyn la xiriirta dhaawac muruqa ah.
Klopp sidoo kale wuxuu ubaahanyahay inuu helo wado uu ku maareeyo taam ahaanshaha iyo ku biirinta ciyaartoy muhiim ah sida Virgil van Dijk , Georginio Wijnaldum Mohamed Salah Sadio Mane et Roberto Firmino kuwaas oo dhamaantood kaqaybqaatay tartamada caalamiga ah ee xulalkooda qaranka xagaagan. Laba iyo toban bilood ka hor, kooxda Liverpool ayaa bilaabatay xilli ciyaareedka ka dib culays aad u badan oo ka badan koobka adduunka marka loo eego kuwa ay xafiiltamaan, laakiin sannadkan kabaha ayaa ku socda mid kale.
Laakiin hadii ku guuleysiga Super Cupka uu cadeeyay culeys aad u adag Kheyraadka uu Klopp jeclaan lahaa, Liverpool wali waa ay badineysaa waana tan ugu weyn ee uu tababarahan qaadan doono kulankaan. Ciyaartoydeeda ayaa cadeeyay awoodooda iyo rabitaankooda wax intaa ka sii badan, laakiin ma ahan markii ugu dambeysay ee la weydiisto inay sidaas sameeyaan xilli ciyaareedkan.
Klopp ayaa yidhi: “Caawa dagaal weyn ayuu ahaa. Ma aanan ogeyn sida ugu wanaagsan ee aan dareemi laheyn hadii aan badino, laakiin waxaay aheyd wax aan caadi aheyn. Waxay ahayd mid qurux badan.
Waxay noqon kartaa oo keliya bisha Agoosto, laakiin Liverpool durba way ogtahay inay tahay inay u diyaar garoobaan maaratoonka.
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) http://espn.com/soccer/uefa-super-cup/story/3921002/super-cup-win-gives-liverpool-a-sense-of-how-difficult-it-will-be-to-eclipse-last-seasons-success
Madrid ayaa ku bilaabaneysa xilli ciyaareedka cusub ee Hazard iyo Bale oo aan loo baahneyn
LA Galaxy vs. FC Dallas - Warbixinta Ciyaarta Kubadda Cagta - 14 Agoosto 2019 - ESPN